UPDATE: Dowladda Soomaaliya oo Cadeysay Dhimasadii Fazul Cabdalla(Wasaxaafadeed). – SBC
UPDATE: Dowladda Soomaaliya oo Cadeysay Dhimasadii Fazul Cabdalla(Wasaxaafadeed).
Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaarada warfaafinta DFKMG ayaa lagu xaqiijiyey dilka Fazul Cabdalla, waxaana warsaxaafadeedkan oo SBC la soo gaarsiiyey uu qornaa sidan
(Muqdisho, 12 Juun, 2011) – Ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay Arbacadii tagtay ee taariikhdu ahayd 8-da June 2011, xilli habeen ah dileen Fazul Cabdalla oo ahaa hoggaamiyihii ururka Argagixisada ah ee Alqaacidda u qaabilsanaa Bariga Afrika.
Dilka Fazul Cabdalla waxa uu ka dhacay agagaarka Ex-Control Afgoye, ka dib markii ay ciidammada dowladdu bar- koontorool ku joojiyeen gaari 4WD ah oo ay saarnaayeen labo nin oo midkood ajnabi ahaa.
Markii Ciidammada dowladdu joojiyeen waxay nimankii isku dayeen in ay dagaallamaan, waxaase u awood sheegtay ciidamada qalabka sida oo ku guuleystay in ay dilaan labada nin. Ka dib markii laamaha ku shaqada leh ay baaritaan ku sameeyeen ninkan ajnabiga ah, lagana qaaday dhecaanka DNA ee lagu ogaado haybta qofka, waxaa la xaqiijiyay in uu yahay Fazul Cabdalla oo ahaa hoggaamiyihii Alqaacidda ee Bariga Afrika.
Dowladda Soomaaliya waxay abaal marin u qalanta howsha ay Qaranka u qabteen siin doontaa askartii dilay dhagar qabe Fazul Cabdalla oo khatar ku ahaa Caalamka oo dhan.
Juun 12, 2011 at 4:44 am
walaalayaal website kaan waa website islaamiya oo kubaxa luqada english oo aad kahelikartaan macluumaad aad ufarabadan oo muhiim ah khaasatan wuxuu aad u an facayaa muslimiinta kunool west